theZOMI: Re: [mrsorcerer:38069] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် ဝမ်းပုံမှန်သွားစေမည့် နည်းလမ်းများ
Re: [mrsorcerer:38069] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် ဝမ်းပုံမှန်သွားစေမည့် နည်းလမ်းများ
ဝမ်းချုပ်တာကို ကျနော် ဆရာဝန်ဖြစ်စ မှ ယခုအသက် ၆၀=ကျော်လာသာ့်အထိ အထက်က စာတမ်းလို သာဖြေကြားခဲ့ပါသည် ။ တခုပိုသည်ကတော့ ဝမ်းပျော့အောင် ဘယ်အသီး ဘာညာ ပြောတတ်ပါသည် ။
အထက်ပါ စာ ထက် အနည်းငယ်ပို အသိတိုးလာသည်ကတော့ မကြာသေးပါ ။
ဝမ်းချုပ်တတ်သူတို့သည် လေလယ်လျှင် အနံအသက် ဆိုးဝါးတတ်ပါသည် ။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ခဲ့ပါ ။ သိတော့ သိနေသည် အကြောင်းရင်းကိုမသိခဲ့ပါ ။ အသက်၆၀=ကျော်မှ သိလာသော အသိလေး ( သာမာန်လူဗြိုန်း အသိ ) ပညာရှင်အသိ မဟုတ်ပါ ။ ကို မျှဝေလိုပါသည် ။
လူ နင့်သတ္တဝါများသည် ပုံမှန်တွင် ဝမ်းမချု်ပတတ်ကြပါ ။ သို့ သော် ယခုခေတ်တွင် ရယ်ဒီမိတ်အစားအစားများ တာရီညခံ အစားအစာများ စားသုံးသူတို့ တွင် ဝမ်းပိုချုပ်တတ်ပါသည် ။ ထို အစားအသောက်များတွင် ထဲ့ထားသော တာရှည်ခံဆေး များကြောင့် လူ၏ဝမ်း ( အူများ ) တွင် သဘာယအတိုင်း ရှိနေသော ပိုးမွှားလေးများစွာကိုလည်း သေကျေစေပါတော့သည် ။ Normal bacterial flora ကို ပြောင်းသွားစေခြင်းက ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်လာပါတော့သည် ။
ဥပမာ အနောက်တိုင်းအစာများဖြစ်သော Ham. bakon, sausages, salami, များစာရှိပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇီးယို ဇီးပေါင်း ..ထိုအစာတို့ ကို အထားခံအောင် သုံးရသောဆေး ပါသောအစာများစာသူတို့ တွင် ပိုမို သိသာပါသည် ။
တခု သတိထားမိလာသည်က ၄င်း ဗိုလ်စားများနင့် လုပ်ကို်ငနေရသူ စားဖိုမှုး ( ၃ ) ဦးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နတင့် ဝမ်းချုပ်တာများဖြစ်ပြီး သုံးဦးစလုံး ငယ်ငယ် ( အသက်= ၃၀ ကျော် ) နင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပြီး နစ်ဦး အသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါပြီ ။ ဒါကျနော် သတိထားမိသူလောက်သာ ရှိပါသည် ။
ဝမ်းျခုပ်လျှင် အူမကြိး ( အူသိမ် အားလုံးတို့ သည် ၂၄= နာရီ တလှုပ်လှုပ် လှုပ်ရျားနေရပါသည် ။ ဝမ်းချုပ်တော့ ၄င်း ဝမ်းအတောင့်မာမာကြိးကို အူနံများက ပါတ်တိုက်ရဖန်များလ
2013/4/26 Lu Bo <lubo601@gmail.com>
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် ဝမ်းပုံမှန်သွားစေမည့် နည်းလမ်းများ
Ko Naing Naing shared ၊ သတင်းစုံလင် ဖေ.ဘုတ်တခွင်'s photo.
ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ လူအမျိုးမျိုးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်အောက်သာ ဝမ်းသွားရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သွားတဲ့ဝမ်းက မာကျောခြောက်သွေ့ပြီး နာကျင်စေတယ်ဆိုရင်၊ ဝမ်းသွားရ ခက်ခဲရင် ဝမ်းချုပ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါ စွမ်းအင်မဲ့နေသလိုလို၊ ဗိုက်ပြည့်နေသလိုလို၊ လေပွနေသလိုလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာဟာ သင်စားတဲ့ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ အူအလေ့အထအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းလိုလို ဘဝမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် လောက်တော့ ခံစားရတတ်တဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိစေတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ဝမ်းပုံမှန် သွားစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
၁။ အမျှင်ဓာတ် များများစားပါ
အမျှင်ဓာတ်ဟာ ဝမ်းကို ပျော့ပျောင်းကာ မှန်မှန်သွားစေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံနဲ့ ကောက်နှံထဲမှာ အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ထမင်းစားတိုင်း ထည့်စားပေးပါ။ ပီဇာ၊ ရေခဲမုန့်၊ အသား၊ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ အဆင်သင့်မုန့်တွေမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတဲ့အတွက် လျှော့စား ပေးပါ။ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အသီးတွေက ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ဆီးသီးတွေဖြစ်ပြီး ဟင်းနုနယ်၊ မုန်လာဥနီလို ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေထဲမှာလည်း အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကို ကြေညက်အောင် ဝါးစားဖို့နဲ့ တစ်ကြိမ်စားရင် နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏစားဖို့လိုပါတယ်။
၂။ ရေများများ သောက်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နေရင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ရေနဲ့သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ သောက်ပေးပါ။ ကဖင်းနဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ပါတဲ့ အရည်တွေက ရေငတ်ခြင်းနဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် မသောက်သင့်ပါ။
ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဟာ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာကာ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့မှာ မိနစ် ၂၀-၃၀ လောက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးရုံနဲ့ ပုံမှန် ဝမ်းသွားမှာပါ။
၄။ ဝမ်းသွားချင်စိတ်ပေါ်ရင် အိမ်သာထဲသွားပါ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချက်ပေးသံကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အလုပ်များနေတဲ့သူတွေက ဝမ်းချုပ်ခြင်း ပိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားချင်စိတ် ပေါ်လာတာနဲ့ အိမ်သာထဲ သွားပါ။ သင်ဟာ နံနက်ခင်းတိုင်း ဝမ်းသွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင် အဲဒီအချိန်အတွင်း အိမ်သာထဲ သွားထိုင်ပါ။ ဒါဟာနေ့စဉ် ပုံမှန်ဝမ်းသွားတဲ့ အကျင့် ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ရာ ရောက်ပါတယ်။
၅။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရသာ ဝမ်းနုတ်ဆေးသောက်ပါ
သင်ဟာ ယာယီဝမ်းချုပ်တာဆိုရင် ဝမ်းနုတ်ဆေးသုံးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ အကြာကြီးဝမ်းချုပ်နေတာဆိုရင်တော့ ဝမ်းနုတ်ဆေး သုံးသင့်၊ မသုံးသင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
၆။ သင်မှီဝဲနေသော ဆေးဝါးများအကြောင်း ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ
တချို့ဆေးဝါးတွေဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပါ အသိပေးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/26/2013 07:54:00 AM